Monitoring and controlling (PMP)
ဤ အဆင့်တွင် အားလုံးသော စီမံခန့်ခွဲ့မှုနည်းဗျုဟာများကို အသုံးချရပါသည်။ ပြုမူလုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရရှိလာသော အကျိုးရလဒ်များကို အရည်အသွေး စံချိန်ပြည့်မှီ စေရန် စမ်းသပ် ကြည့်ရှု့ခြင်း၊ မိမိလိုအပ်သော အကျိုးရလဒ်ကို ရရှိစေရန် သေချာစွာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများကို တီထွင်ကြံဆခြင်း၊ အစရှိသည့် စောင့်ကြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ရပါသည်။အရည်အသွေးညံ့သည့် ရလဒ်ရှိပါက ပြန်လည် ကောင်းမွန
Project management - monitoring and controlling
ပြီးဆုံးခြင်း(Closing) - PMP
ပရောဂျက်တစ်ခု အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးနိုင်ရန် လိုအပ်သော အတည်ပြုခြင်းများကို အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းရပါသည်။ သဘောတူညီထားသည့်အတိုင်း ပြီးမြောက်သည်များကို Customer မှ အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးပေးပြီးမှ သက်ပြင်း ဟင်း…. ချနိုင်သည်။သို့ရာတွင် ပြီးဆုံးပြီး ဆိုပြီး စိတ်ဒုံးဒုံးချကာ စိတ်လိုလက်ရ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်၊ အနာယူလို့ မရသေးပါ။ ငှားရမ်းထားသည့် စက်ကိရိယာများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ဘဏ် စာရင်းရှင်းတမ်း ပိတ်ခြင်းများ ပြီးဆုံးသ
Project Management - ပြီးဆုံးခြင်း(Closing)
လုပ်ဆောင်ခြင်း (Executing) - PMP
ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီးသည်နှင့် ထိုအစီအစဉ်အတိုင် ပြုမူ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အလုပ်သမားများ စတင် အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ စက်ပစ္စည်းများလည်း စတင်လည်ပတ် မောင်းနှင်သည်။ ထိုသို့ ပြုမူလုပ်ဆောင်နေစဉ် ကာလအတောအတွင်း အသုံးချရမည့် နည်းဗျုဟာများသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။၁။ Project Charter မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော Methodology အား အသုံးချခြင်း၂။ ပြုမူလုပ်ဆောင်နေစဉ် ရရှိလာမည့် အရည်အသွေး
Project Management - လုပ်ဆောင်ခြင်း (Executing)
ဤ အဆင့်တွင် အားလုံးသော စီမံခန့်ခွဲ့မှုနည်းဗျုဟာများကို အသုံးချရပါသည်။ ပြုမူလုပ်ဆောင်ခြင်းမှ ရရှိလာသော အကျိုးရလဒ်များကို အရည်အသွေး စံချိန်ပြည့်မှီ စေရန် စမ်းသပ် ကြည့်ရှု့ခြင်း၊ မိမိလိုအပ်သော အကျိုးရလဒ်ကို ရရှိစေရန် သေချာစွာ စစ်ဆေးခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများကို တီထွင်ကြံဆခြင်း၊ အစရှိသည့် စောင့်ကြည့်ခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ရပါသည်။အရည်အသွေးညံ့သည့် ရလဒ်ရှိပါက ပြန်လည် ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ကာ သင့်တော်သော မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ ရေးမှတ် ထားရပါသည်။ သို့မှသာ နောင်တချိန် အမှားများကို လေ့လာ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပေမည်။ထို့နောက် ပရိုဂျက်ကြီး တခုလုံးအတွက် ပြီးမြောက်သွားသောအရာ ရလဒ်များကို အတည်ပြုပေးရသည်။
ပရောဂျက်တစ်ခု အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးနိုင်ရန် လိုအပ်သော အတည်ပြုခြင်းများကို အဆင့်ဆင့် ဖြတ်သန်းရပါသည်။ သဘောတူညီထားသည့်အတိုင်း ပြီးမြောက်သည်များကို Customer မှ အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးပေးပြီးမှ သက်ပြင်း ဟင်း…. ချနိုင်သည်။သို့ရာတွင် ပြီးဆုံးပြီး ဆိုပြီး စိတ်ဒုံးဒုံးချကာ စိတ်လိုလက်ရ အပန်းဖြေ ခရီးထွက်၊ အနာယူလို့ မရသေးပါ။ ငှားရမ်းထားသည့် စက်ကိရိယာများ၊ အလုပ်သမားများ၊ ဘဏ် စာရင်းရှင်းတမ်း ပိတ်ခြင်းများ ပြီးဆုံးသည် အထိ ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားရပါသည်။ သို့မဟုတ် လျှင် မလိုအပ်သော ကုန်ကျစရိတ်များက မှန်းထားသော ပရောဂျက်၏ ဘတ်ဂျက်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါသေးသည်။ဤသည် မှာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းပညာ Project Management ၏ အကြမ်းဖျင်း သဘောပင် ဖြစ်သည်။ ဤအရာများ၊ ထိုအရာများ ရှိသည်ဟု ပြောပြရုံပင်ဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော ပညာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ သေသေချာချာ စနစ်တစ်ကျနှင့် ချဉ်းကပ်လေ့လာစေချင်ပါသည်။ ပညာရပ်တစ်ခု ကို ချဉ်းကပ် လေ့လာတော
ပရောဂျက်တစ်ခုအတွက် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြီးသည်နှင့် ထိုအစီအစဉ်အတိုင် ပြုမူ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် အလုပ်သမားများ စတင် အလုပ်လုပ်ကြရသည်။ စက်ပစ္စည်းများလည်း စတင်လည်ပတ် မောင်းနှင်သည်။ ထိုသို့ ပြုမူလုပ်ဆောင်နေစဉ် ကာလအတောအတွင်း အသုံးချရမည့် နည်းဗျုဟာများသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။၁။ Project Charter မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော Methodology အား အသုံးချခြင်း၂။ ပြုမူလုပ်ဆောင်နေစဉ် ရရှိလာမည့် အရည်အသွေးအား စမ်းသပ် စစ်ဆေးခြင်း (Quality Planning)၃။ ပြုမူလုပ်ဆောင်မူ အဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လူများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း (Human Resource Planning)၄။ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း (Communication Planning)၅။ ပြင်ပမှ လိုအပ်သော သဘောတူညီချက်များ၊ အကူအညီများ၊ စီပွားရေးဆိုင်ရာ အဆက်အသွယ် များကို စီမံခန့်ခွဲမှု (Procurement Management)ဤ အဆင့်တွင် အသုံးချရမည့် နည်းဗျုဟာ ၅-ခု မျှ ရှိပါသည်။ဤ အပိုင်း
ပရောဂျက် အစပျိုးခြင်း စတင်ပြီးသည်နှင့် အစီအစဉ်များပြုလုပ်ရေးဆွဲခြင်း Planning အဆင့်သို့ ကူပြောင်း ရောက်ရှိပါသည်။ ထိုအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာသည် ပရောဂျက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း(Develop Project Management Plan) ဖြစ်သည်။အစီအစဉ်များ ပြုလုပ် ရေဆွဲခြင်းသည် ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးအတွက် အခရာဖြစ်သလို့၊ အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ရေးဆွဲချိန်သည် အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များထက် ပိုမိုပြီး အချိန်ယူရပါသည်။ ထိုသို့ အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲနိုင်ရန် အတွက် အစပျိုးခြင်းအဆင့်တွင် ရရှိခဲ့သော Project Charter, Preliminary Project Scope Statement, Methodology များကို အသုံးပြုရပါသည်။မည်သည်များကို အစီအစဉ်ပြု ရေးှဆွဲ ရပါမည်နည်း။၁။ ပရောဂျက် အတိုင်းအဆပမာဏအား စီမံခန့်ခွဲရန် (Scope Planning)၂။ ပရောဂျက် အချိန်ဇယားရေးှဆွဲရန် (Schedule Development)၃။ ကုန်ကျမည့် စရိတ် ငွေကြေး ပမာဏအား စီမံခန့်ခွဲ တွက်ချက်ရန် (Cost Estimating and B
အစပျိုးခြင်း (Initiation) - PMP
Project တစ်ခု အစပျိုးခြင်းသည် ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ စတင်ကြပါသနည်း။ Project Management Office (PMO) သည် customer ၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး Kick Off အစည်းအဝေး လုပ်ပြီးသွားသည်နှင့် လိုအပ်သော သဘောတူညီချက်၊ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် လုပ်ငန်းအတိုင်းအဆပမာဏ(Project Scope)၊ Project တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မည့် Stakeholders၊ Communication Channels များကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် Project တစ်ခုကို PMO မှ ချမှတ်ပေးပါသည်။(ထို့ကြောင့် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တော့မည်၊ အင်တာဗျုးတွင် ပြောကြဆိုကြပြီ ဆိုလျှင် အရေးကြီးသော အချက်သည် လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ(Organization Structure) ကို မေးမြန်းဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ လုပ်ကိုင်ရမည့် အလုပ်သည် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်မှု(Process) များကို ဖြတ်သန်း၍ လာမည်နည်း။ ဘယ်သူ့ကို မိမိက Report ပေးရမည်နည်း။ ကိုယ့်လက်အောက်တွင် မည်သူတွေ ရှိမည်နည်း။ ထိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (Organization Stru